72 Ọkpụkpụ Pimple patị-Ngwọta plasta arụ ọrụ
Aha: AKA+ Pimple Patch
Ngwugwu: 72 ngọngọ. 8mm * 48ea + 12mm * 24ea
Ụdị akpụkpọ ahụ: Mmanụ mmanu, Nchikota, Mmetụta, nkụ, akpụkpọ anụ
1. Na -asị ka ọ dị mma maka ntụpọ akpụkpọ ahụ
Mpekere ndị a dị obere, na-agagharị agagharị, na-eme ngwa ngwa na-amịpụta ntụpọ na-etolite ma ọ bụ pịmpụ adịlarị. Ihe dị ka akwụkwọ mmado dị ka hydrocolloid na-arụ ọrụ dị ka mkpuchi na-echebe ebe a na-emeso ya iji mee ka ntụpọ ahụ pere mpe n'ihe na-erughị otu ụbọchị.
2. Ngwa dị mfe
Ọ dị mfe itinye pimple pimple, hichaa mpaghara ahụ ma tinye otu kwachie na mpaghara chọrọ ọgwụgwọ. Wepu micro dart mgbe awa 8 gachara wee sachaa mpaghara ahụ wee tinye ọzọakpụkpọ anụ, ma ọ bụrụ na achọrọ.
3. Obi Ọjọọ N'efu
A na-eji akara enweghị mmanya na-eme ihe ndị ahụ Peach Slices na-enweghị kemịkal na-emerụ ahụ, na enweghị obi ọjọọ na vegan. Ha na -ebute ihe mgbu efu mana ha dịkwa oke ike ịnọrọ n'abalị ma enwere ike eyi ya n'okpuru etemeete.
4. Kwesịrị ekwesị maka ụdị anụ ahụ niile
Patch ọgwụgwọ ntụpọ ntụpọ dabara adaba maka ụdị akpụkpọ anụ niile: Akọrọ, mmanu, nkịtị na ngwakọta. Nhichapụ mmerụ ahụ adịbeghị mfe na enweghị nchekasị!
1. AHỤ+ Pimple Patch na -enyere aka ibelata ọbara ọbara nke ntụpọ;
2. Hydrocolloid elu iji mee ka ebe ahụ metụrụ mmiri nke na -akwalite ọgwụgwọ anụahụ
3. Chebe onwe gị pụọ na unyi na kọntaktị mpụga.
4. Enwere ike iji ya tupu ịmejupụta ngwa iji nyere aka dobe mpaghara metụtara.
1. Buru ụzọ hichaa ihu gị;
2. Tụnye kwachie ahụ ka ọ na -etolite ma pịa ike na nsọtụ ya;
3. Hapụ kwachie na mpaghara ihe ahụ metụtara maka awa 6+;
4. Wepu kwachie mgbe isi ọcha na -amịkọrọ.
Ịdọ aka na ntị
Ejila kwachị na ngwaahịa ọgwụ ndị ọzọ.
Biko gakwuru dọkịta gị ozugbo ihe otutu gị na -akawanye njọ mgbe i jichara ya.
Ejila ya ma ọ bụrụ na ihe mkpuchi ihe dọwara adọwa ma ọ bụ mebie na mbụ.
Ị na -eji mgbe ngafe ụbọchị.
Nke gara aga: Ihe mkpuchi isi-ngwugwu ihe mberede
Osote: Ahịhịa enyemaka ihe mgbu
Pimple Patches Maka Ihu